बुढानिलकण्ठ नगरका जनतामा परिचित र लोकप्रिय पार्टी एमाले नै हो, हामीले जित्छौँः उद्धव खरेल | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २३ गते २२:४४ मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार उद्धव खरेलसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
चुनाबी अभियानमा नगरबासीहरुको घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनु भएको छ ? र यसबाट कस्तो महशुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
संविधान निर्माण पछि, २० वर्ष पछि हुन गईरहेको यो स्थानिय तहको निर्वाचन अत्यन्त महत्वपुर्ण छ ।
हामी २०५४ को स्थानिय निर्वाचनमा पनि सहभागि भएर निर्वाचित भएर निरन्तर जनताको सम्पर्कमा राजनीतिक काम, विकासका काम, सामाजिक गतिविधिमा एकदम सक्रियता पुर्वक लागिरहेको कारणले हामीले अपेक्षा गरिरहेको अवस्था नै हो । तसर्थ हामी तिव्र व्यग्रता पछि यो हुन गईरहेको स्थानिय निर्वाचनमा एकदम सक्रियतापुर्वक यसमा हामी हुमिएका छौँ । जनताहरु उत्साहित भएको देखेका छौँ । हामी पनि योजनाबद्ध रुपबाट आफ्नो अभियानलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
साविकको ६ गाविस मिलेर सिंगो बुढानिलकण्ठ नगरपालिका बनेको हो, त्यस मध्यबाट यहाँले जोडेको कुरा १९ वर्ष पहिला साविकको एक गाविसबाट यहाँ गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित बन्नुभएको थियो । यसलाई समिक्षा गर्दा आजको दिनसम्म आईपुग्दा उद्धव खरेलबाट जनताले के पाए ?
हामी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक कार्यकर्ता २०४७ सालको परिवर्तन पछि त्यो बेलाको एउटा नयाँ जेनेरेसनको रुपमा उत्साहित भएर यो राजनैतिक काममा, सामाजिक काममा होमिएका हौँ । तसर्थ यो बुढानिलकण्ठ नगरपालिका साविकको ६ वटा गाविसमा तत्कालिन बेलामा त्यस बेलामा हुनाहार युवाहरु जो चाहि ६ वटै गाविसमा स्थानिय निर्वाचनमा हुमिनु भयौ । विभिन्न किसिमको पेशा, व्याबसाय छाडेर पनि देश र जनताका लागि, गाउँको लागि केहि गर्नु पर्छ भनेर यसै क्रममा हाम्रा साथिहरु ६ वटै गाविसबाट निर्वाचित नी हुनुभयो । हामी त्यस बेलामा सचेत थियौ । पुरानो पुस्ताबाट त्यसलाई विस्थापित गरेर त्यसमा नयाँ पुस्ताहरु निर्वाचित भएका थियौँ ।
हामीसंग योजना थियो, सपना थियो । त्यस बेलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । हरेक गाविसमा बाटोका पुर्वाधारहरु थिएनन्, खाने पानिको पुर्वाधार पनि एक दम कम थियो, नयाँ बस्तिको विकास पनि एकदम कम थियो । यो विचमा अत्यन्तै धेरै कुराहरुको प्रगति भएको छ । धेरै पुर्वाधारको विकास भएको छ । चेतनाको स्तरमा पनि एकदमै धेरै विकास भएको छ । तसर्थ त्यो विकास निर्माणका कुराहरुलाई अझ व्यबस्थित गर्नका लागि आ–आफ्नो ठाउँमा ६ वटै गाविसको एउटा मोर्चा थियो । हामीले नेकपा एमालेको तर्फबाट हरेकको छलफल गथ्र्यौ । सामुहिक योजना बनाउँथ्यौ । त्यसलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने ? भनेर क्रियाशिल भईरहेका थियौँ र राजनैतिक काममा पनि साविकको ५ नम्वर अहिलेको बुढानिलकण्ठ र खड्का भद्रकाली र अहिलेको ४ वटा गाविस, ६ वटा गाविसमा निरन्तर रुपमा राजनैतिक काम, सामाजिक काम, यस क्षेत्रको समस्या, आवश्यकता प्राथमिकरणको कुरामा निरन्तर सक्रिय रुपमा सहभागि भईरहेको कारण हामी यहाँको समस्यासंग परिचित छौँ, यहाँको समाधानका कुराहरुमा लागि रहेका छौँ । अहिलेको अबस्थामा ६ वटा गाविस मिलेर सिंगो नगरपालिका बनेको छ । हिजो चाहिँ छुट्टा–छुट्टै रुपमा योजना बनाईन्थ्यो । अब एकिकृत ढाचाको रुपमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य पुनःसंरचनाको स्थानमा ७४४ वटा स्थानिय निर्वाचन अन्तर्गत यो एउटा काठमाडौँ राजधानीको शिरमा रहेको अत्यन्त सुन्दर, संभावना बोकेको नगरपालिका हो । धेरै आधारभुत पुर्वाधारका विकासहरु तयार गरि सकेका छौँ । अब हामी यसलाई अझ व्यबस्थित गरेर नगरको हिसाबले अगाडी बढाउँने क्रममा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ ।
अरु दलका उम्मेदवारको भिड–भाडमा उद्धव खरेलको उम्मेदवारी किन र के को लागि ?
धेरै ठाउँमा यहि प्रश्न आउँने गर्छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको केही–केही फाटहरुको विकास भन्दा बाहेक धेरै ठाउँको भुगोलसंग हामी परिचित छौँ । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका छौँ । धेरै ठाउँका काममा हामी लागेका छौँ । तसर्थ यो क्षेत्रको शसक्त जनतामा आधारित, जनतामा परिचित र लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले रहेको छ । तसर्थ लोकप्रिय पार्टीका हामी लोकप्रिय कार्यकर्ता भएको दावी गर्छौ किनभने यहाँ रहेका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु अगुवा हामी हौँ ।
हामीले समाजमा धेरै कामहरु गर्यौ । यस विचमा टिप्पनि गर्ने, अरुको विरोध गर्ने, जनतालाई असुविधा हुने कुनै कामहरु गरेका छैनो । हामी दावी गर्न सक्छौँ ।
नेकपा एमालेका बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार उद्धव खरेलसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः
अन्नपूर्ण बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि पायोनियरलाई
काठमाडौँ । १३ औं राष्ट्रव्यापी विद्यालयस्तरीय अन्नपूर्ण मैत्री खुला बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि कपनमा रहेको पायोनियर पब्लिक ...
काठमाडौँ । गत बैसाख ३१ गते सम्पन्न स्थानिय निकायको चुनाबी परिणाम नेपाली कांग्रेसका लागि सन्तुष्टिजनक देखिएन । कांग्रेसको बाहु ...
काठमाडौँ । मुलुक यत्ति बेला चुनाबि महोलले केन्द्रित रहेको छ । पार्टीका उम्मेदवारहरु अहिले नगर, वडा–बासीहरुको घर दैलो का ...
काठमाडौँ । १९ बर्ष पछी हुन लागेको स्थानिय निकायको चुनाबी रौनक यति बेला चिया पसल देखि उच्च स्थानसम्म बहसको विषय बन्न थालेको छ ...